Wiil qurbajoog ah oo dhaawac halis ah loogu geystay Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Wiil qurbajoog ah oo dhaawac halis ah loogu geystay Muqdisho
Wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Shaafi Cabdi Dollar, ayaa khamiistii hore dhaawac xooggan loogu geystay magaalada Muqdisho, xilli uu ku suganaa xeebta Liido.
MUQDISHO, Soomaaliya - Askari ka tirsan Nabad-sugidda Soomaaliya, gaar ahaan qeynta ka howl-gasha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, ayaa lagu eedeeyay inuu dhawac xooggan u geystay Shaafi Cabdi Dollar, oo ah muwaadin qurbo joog ah oo dhawaan dib ugu soo laabtay dalka.
Sida ay xaqiijiyeen ehelkiisa, 15-kii bishan July 2021, ayaa shaafici dhaawaca arxan-darrada ah loogu geystay degmada Cabdicasiis, gaar ahaan xeebta Liido, halkaas oo isaga iyo hooyada dhashay ay ku sugnaayeen khamiistii hore.
Askariga dhibka geystay oo magaciisa lagu sheegay Cumareey Abuukaato, ayaa markii hore xabad ku dhuftay dhibanaha, kadibna wuxuu dhowr meel oo halis ah ka galiyay Middi, (Toorey), ka hor inta uusan ka baxsan goobta uu falku ka dhacay.
Ehellada dhibanaha ayaa sheegay in laamaha cadaaladda Dowladda federaalka ay iska indha-tireen, soo qabashada Cumareey Abuukaato oo falka fuliyay sida ay sheegeen, waxayna nin magaciisa la yiraahdo Cabdiqani Jaalle, ku eedeeyeen inuu diidan yahay in la soo xiro askariga dhibka geystay.
“Waxa cajiib ah in ilaa hadda aan la soo xirin askariga falkan geystay balse uu weli goobta shaqadiisa oo ah irida madaarka marine gate la dhaho uu joogo, taliyihiisana la dhaho Cabdiqani Jaalle isna uu is diidsiinaayo in dembi Askarigisu galay, Saldhiggii kiiska hayayna waxba ka qaban la'yahay”. Ayuu yiri mid ka mid ah ehelka dhibanaha.
Ma’aha markii ugu horreeysay ee askari ka tirsan ciidamada Dowladda uu dil ama dhaawa u geysto qof shacab ah, isla-markaan uu qof masuul ah diido in dib-geystaha lala xisaabtamo.
Maxay ka tiri Beesha Caalamka khilaafka Farmaajo iyo Rooble?
Warar 17 September 2021 19:34
Beesha Caalamka ayaa war saxaafaded wadajir ka soo saaray khilaafka sii kordhaya ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble oo wiiqi kara xasilloonida Soomaaliya isla markaana uu carqaladayn kara geeddi-socodka doorashada.
Jabuuti oo ka hadashay eedeynta Villa Soomaaliya
Warar 17 September 2021 18:10
Lataliyihii Farmaajo oo laga helay 10 Baasaboor
Warar 17 September 2021 16:53
Maxaa hortaagan in Ikraan Tahliil hesho caddaalad?
Warar 17 September 2021 16:47